Ugbo Finnigan na-eme ka owuwe ihe ubi na-ewe ihe ubi na teknụzụ nchọpụta mkpụrụ - Potatoes News
Ugbo nke Finnigan na-eme ka owuwe ihe ubi na-emepụta ihe ọkụkụ na teknụzụ nchọpụta ihe ọkụkụ
Inye ihe ntinye ihe nkpuru gi choro bu isi ihe kacha mma. Kwa afọ. Ha maara nke ahụ na Farmịn nke Farm, otu n'ime ndị na-akụ mkpụrụ osisi na inine na Ireland. Na nyocha ha na-aga n’ihu maka ụzọ ha ga-esi mee ka ihe ubi ha ka mma, ha mechara biri na Topcon.
Nsonaazụ dị ịrịba ama na Ugbo Finnigan
N'okwu edere na vidiyo dị nkenke, onye nwe ugbo, onye na-azụ ahịa teknụzụ na agrospecialist nke goro ọrụ Ugbo Finnigan iji kụziere ha otu esi enyocha ihe ubi ha kọwaa etu CropSpec - Ngwọta ọrụ ugbo Topcon - si enyere ha aka ịkọwapụta ahụike nke ihe ọkụkụ dị n'okpuru ala na mgbanwe ngbanwe nke njikọta spam na ịgbara mmiri ka ọ tụọ ọnọdụ. Ndị ọkachamara atọ a kpọrọ nsonaazụ ahụ "dị ịrịba ama" ma na-atụ anya ịhụ uru ozugbo na nke a technology n'afọ ọzọ.
Nzaghachi na-egosi n'ọdịnihu maka ọrụ ugbo achọrọ
na-achịkwa owuwe ihe ubi nduku n'ọdịnihu
Paul Ward, agronomist na FarmTech Solutions nke ndi oru ugwo Finnigan goro, na-akowa na vidio a: “CropSpec na eme ka ihe gbasara ahihia di nma maka iwe ihe ubi. Site na teknụzụ a, anyị nwere ike ịhazi oke mmiri na fatịlaịza achọrọ. Nke a abụghị naanị na-eme ka ala na akuku ahụike. Ọ na-emekwa ka e jide n'aka na owuwe ihe ubi ka mma ma na-enye azịza ga-egosi n'ọdịnihu maka nrụgide siri ike nke nkwado ebumnuche enyere ndị ọrụ ugbo. ”
PRGBỌ - Ngwọta Topcon na-enye njikwa pụrụiche maka fatịlaịza 4 ruo 8 na nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. O zuru ezu iji maapụ dị adị ma ọ bụ bubata nke ọhụrụ, gbanye nduzi akpaaka - wee banye ọrụ. X25 na X35 consoles na-enye ngosipụta enwere ike idobe nke ọsọ ngwa, yana ịbanye ụzọ na ọrụ ndị ọzọ. ASC-10 ngwọta na-enye njikwa akpaaka maka ngalaba 10; enwere ike ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ a ruo 30 site na ị kwụnye modulu ASC-10 atọ. Ihe ngwọta X25 na-achịkwa ọnụọgụ ọgwụ maka ngwaahịa 4 yana X35 maka 8 ngwaahịa.
Ihe ngwọta a na - enye gị ohere ịhazi usoro ọrụ gị niile. Akụrụngwa na-eduzi onwe gị na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ngwa ngwa ma kpuchie nnukwu mpaghara n'otu ụbọchị, na-emeziwanye mkpuchi mkpuchi. Akpaka ngalaba njikwa mma nke fatịlaịza ojiji site na iwepu abụọ gafere na skips na itinye ngwaahịa na nri ebe. Dosing ọnụego njikwa optimizes fatịlaịza na chemical ngwa. Na mmechi, map fatịlaịza na ndekọ na-enye ozi ziri ezi banyere ịkọ ubi, na-echekwa ndị ọrụ ụlọ ọrụ oge.
Topcon mgbasa mgbasa - - Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ọkwa nke ziri ezi ha chọrọ, ruo 2cm, na-eji njikwa njikwa anyị kachasị mma na ngwọta nduzi akpaaka dị elu. Sistemụ ISO UT, yana nkwado maka ịgba ọsọ ọsọ maka ngwaahịa 8 yana njikwa onwe maka akụkụ 32, bụ ezigbo azịza maka ndị na-agba ọsọ na ndị na-anya onwe ha. You nwere ike ibubata ọnụego dosing na kaadị ndekọ maka dosing ọrụ, yana mepụta ndekọ nke fatịlaịza fatịlaịza - akwụkwọ niile na-arụ ọrụ akpaghị aka. Ọ bụrụ na achọrọ ịba ụba oge ọ bụla, ọ zuru ezu ịgbakwunye usoro nghazi NORAC, nke kwekọrọ na ngwa Topcon.
Ngwọta mgbasa nke Topcon na-enye ike dị ukwuu yana nkenke ma nye njikwa kacha mma maka ụdị ngwa dị iche iche. Mfe njikwa bụ otu isi uru nke ngwọta a. Enwere ike ịchịkwa ọnụego metering site na maapụ metering dị ma ọ bụ site na ịmepụta ezigbo oge fatịlaịza. Map ndị na-eme dosing maka njikwa ọsọ ọsọ / njikwa akpaaka, yana nkenke dị elu / nduzi ntụzi aka, na-enye gị ohere ịme ihe ịchọrọ, na ọsọ ọsọ, n'oge kwesịrị ekwesị na ebe kwesịrị ekwesị.
ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ iji tụọ ihe oriri edozi maka owuwe ihe ubi kacha mma
Iji teknụzụ ihe mmetụta akuku iji tụọ nri edozi maka mkpụrụ kacha mma bụ otu n'ime ngalaba na-eto ngwa ngwa na ịkọ ugbo. A na-eji ihe mmetụta sensọ Topcon Crop na X20 na X35 consoles iji soro mgbanwe n'ọhịa. Enwere ike hazie data na mbugharị ma ọ bụ chekwaa maka nyocha ọzọ na okike map okike.
Site na ijikọta spraying na ịgbasa ngwọta na ihe mmetụta CropSpec dị elu, ị nwere ike hụ na agbakwunye fatịlaịza dị ka mkpa ihe ọkụkụ si dị. Ntughari on-fly site na iji ebumnuche akọwapụtara onye ọrụ, mepụta eserese ogbe, ma ọ bụ ịtọọ oge ma tinye n'otu ngafe. GNSS auto-nduzi na ihe mmetụta CropSpec na-enye 24/7 ọrụ. You nwere ike ifatilaiza n'ubi gị na oge iji tinye nri ndị ịchọrọ n'oge a, ma ọ bụ tinye fatịlaịza n'ehihie nke mmiri ozuzo iji melite arụmọrụ nke usoro ahụ.
Ugbo 'Finnigan's Farm meziwanye owuwe ihe ubi na teknụzụ nchọpụta ihe ọkụkụ'
/ akụrụngwa-na-na ubi /
Tags: mgbasa oziControlowuwe ihe ubismart ugbosmart sprayertopcon
IZIRỊTA na akpaaka: SYSTEMS & COMPONENTS 2022 ga-egosi ike ịnya ụgbọ ala kwụ ọtọ na mpaghara okporo ụzọ awara awara.
Ngwọta ihe ubi.
Ngaji ma ọ bụ eriri - Grimme GL 430, GB 430
Sencrop rụnyere ọdụ ụgbọ elu ihu igwe puku iri abụọ
Nduku na-atụ anya na mọstad / arugula ngwakọta ga-akwụ ụgwọ
ND Europe NA-ACHỌ MGBE MGBE ND AM AMERICA HỌRỌ UTARA
5 afọ gara aga
Nchọpụta ihu igwe nwere ọgụgụ isi nwere ike inyere ndị na-akụ Afrịka aka